FAQs - Shandong Lu Young Machinery Co., Ltd
1. Nzira yekuwana sei mutengo weCNC lathe machine, cnc milling machine, cnc vertical machine center, manual lathe nokukurumidza?
Kazhinji isu tichakurudzira iyo chaiyo modhi (cnc lathe muchina, cnc milling muchina, manual lathe, cnc vertical machine center, swiss type cnc lathe machine, slant bed cnc lathe machine) maererano nedhirowa yako kana mifananidzo, tichakupa mhinduro yedu yakanaka, mutengo wakaderera uye mhando yepamusoro.
2. Zvakaoma here kuisa cnc lathe machine, cnc milling machine, swiss type cnc lathe machine?Nzira yekuisa sei muchina?
Isa muchina (cnc lathe muchina, cnc milling muchina, manual lathe, cnc vertical machine center, swiss type cnc lathe machine, slant bed cnc lathe machine) iri nyore.Muchina uyu unogona kuunganidzwa zvakanaka uye kana wagamuchira muchina, unongoda kugadzirisa nhanho uye kuwedzera mafuta.Kana iwe usati waziva nzira yekuiisa isu tichakuitira vhidhiyo.
3. Ndeipi nguva yewaranti yemuchina?
Rimwe gore remuchina wese (cnc lathe muchina, cnc milling muchina, manual lathe, cnc vertical machine center, swiss type cnc lathe machine, slant bed cnc lathe machine), panguva iyo kana paine zvidimbu zvakakanganisika tichapa zvitsva. zvikamu zvemahara.
4. Kushandira mhiri kwemakungwa kunobvumidzwa here?
Chokwadi.Kana muchina (cnc lathe muchina, cnc milling muchina, manual lathe, cnc vertical machine center,swiss type cnc lathe machine, slant bed cnc lathe machine) inoda oversea service.Injiniya yedu inogona kupa mhiri kwemakungwa sevhisi mune yakajairika mamiriro (Force Majeure Kunze).Ruzivo rwakadzama rwaungatibata mahara.
5. Ndeipi nguva yekubhadhara?
Kubhadharwa kwemuchina wedu (cnc lathe muchina, cnc milling muchina, manual lathe, cnc vertical muchina centre, swiss type cnc lathe machine, slant bed cnc lathe machine) i30% T/T sedhipoziti, mari yasara inofanira kubhadharwa isati yatumirwa. .Tinogamuchira L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A uye MoneyGram nezvimwe.
6. Muchina wacho unogona kugadzirwa here?
Chokwadi, isu tinogona kugadzira muchina wakasarudzika maererano nezvako zvinodiwa.Sanganisira kuisa maturusi ekurarama, turret yekugara, VDI turret ye cnc lathe muchina.Isa 4th axis, 5th axis, mutsara gwara nzira yemuchina wedu wekugaya.